शिवको आसुबाट भएको थियो रुद्राक्षको उत्पत्ति,जानौ शिव शंकरले धारण गर्ने तेस्रो नेत्र, रुद्राक्ष, डमरू, वासुकी, चन्द्र, गंगा आदिको महत्व -
२०७७, १२ श्रावण सोमबार ००:०७ July 27, 2020 clickonLeaveaComment on शिवको आसुबाट भएको थियो रुद्राक्षको उत्पत्ति,जानौ शिव शंकरले धारण गर्ने तेस्रो नेत्र, रुद्राक्ष, डमरू, वासुकी, चन्द्र, गंगा आदिको महत्व
निधारमा तेस्रो आँखा, रुद्राक्ष, डमरू, वासुकी, चन्द्र, गंगा… यी सबै कुरा सुनेर हाम्रो आँखा अगाडि आउने तस्वीर बम बम भोले अर्थात् स्वयंभु शिवशंकरको हो… तर के तपाईंले सोच्नुभएको छ? यी प्रतीकहरूको अर्थ के हो ? आज हामी हाम्रा पाठकहरूलाई शिवशंकरको प्रतीकहरूको महत्व र उनीहरूको महत्त्वको बारेमा जानकारी दिने छौ ।
चन्द्रमा: हामी मध्ये धेरैलाई थाहा छ कि शिवको एक नाम सोम पनि हो । सोमको अर्थ चन्द्रमा हो। यो मनको एक कारक मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा शिवको निधारमा रहेको मुकुटलाई पनि मन नियन्त्रणको प्रतीक मानिन्छ।
त्रिशूल: भगवान शिवको त्रिशूलले ३ प्रकारको प्रकारको शक्ति अर्थात् सत, रज र तामाको प्रतीक हो। त्यहि ३ प्रकारका पीडाहरू पनि दैनिक, दिव्य, भौतिक विनाशको सूचक हो। यो विश्वास छ कि कुनै पनि शक्ति यसको अगाडि टिक्न सक्दैन।
वासुकी नाग: वासुकी नाग शिवका प्रख्यात भक्त थिए। उहाँको भक्तिबाट प्रसन्न भएर शिवले उनलाई घाँटीमा बाँच्नका निम्ति वरदान दिए। भगवान शिवको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भन्ने नाम पनि स्पष्ट छ कि शिव सर्पहरु संग एक अटुट सम्बन्ध छ।
डमरू: भोलेनाथको डमरू नादको प्रतीक हो। शिवलाई संगीतको जनक मानिन्छ। उनि दुई प्रकारका नृत्य प्रदर्शन गर्दछन। यी मध्ये एक तण्डव र अर्को डमरू खेल्दा हो।
वृषभ: शिवको वाहन वृषभ हो। यसको अर्थ धर्म हो। वेदले धर्मलाई-खुट्टे जीवको रूपमा वर्णन गरेको छ। यी ४ खुट्टा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष मानिन्छन्। यस अवस्थामा, वृषभको ४ धर्म अर्थात् अर्थ ,धर्म, काम र मोक्षको अधीनमा छन्। वृषभलाई नन्दी पनि भनिन्छ।
जटा: शिवलाइ अन्तरिक्षको देवता भनिएको छ। तिनीहरूलाई व्योमकेश पनि भनिन्छ। त्यसकारण आकाश उनीहरूको प्राकृतिक रूप हो।
गंगा: शिवको जटाबाट गंगा बग्छ। त्यसबेलादेखि शिवलाई पानी चढाउने प्रचलन शुरू भयो। गंगालाई स्वर्गबाट ​​पृथ्वीमा लैजाँदा, यो गंगाको वेग यति उच्च छ कि पृथ्वीमा ठूलो प्वाल हुन सक्छ र यदि यो भयो भने, गंगा जमीनमा पतालमा समाउन्थीन। यसको समाधानको रूपमा शिवले गंगालाई आफ्नो जटामा अँगाले। तब यो पृथ्वीमा उत्रियो।
भस्मा: शिवको शरीरमा खरानी छ। यो संसारको व्यर्थता हो। यो आकर्षण, अनुलग्नक आदि बाट मुक्तिको प्रतीक मानिन्छ।
तेस्रो आँखा: शिवको तेस्रो आँखाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। उसको तेस्रो आँखा सधैं बन्द छ तर जागृत पनि छ।
शिव चक्र: शंकरको चक्रको नाम भभरेन्दु हो। चक्र छोटो छ, तर यो एक उत्तम हतियार मानिन्छ।
त्रिपुंड तिलक: शिवको निधारमा राखिएको तिलकलाई त्रिपुण्ड भनिन्छ। यो तिलक तीन लामो पट्टिबाट बनेको छ। यो त्रैलोक्य र त्रिकोणको प्रतीक मानिन्छ। यस बाहेक, यो सतोगुना, रजोगुना र तपोगुनाको प्रतीक पनि मानिन्छ। कृपया बताउनुहोस् कि त्रिपुंड सेतो चप्पल वा खरानीबाट बनेको छ।
रुद्राक्ष: रुद्राक्ष पनि शिवको महत्वपूर्ण प्रतीक हो। ती शिवको आँसुबाट उत्पन्न भएको विश्वास गरिन्छ। यो भनिन्छ कि जो एक ले यसलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्दछ।
मोटो हुनु कोरोना वायरसका रोगीका लागि हुन सक्छ खतरा!५ टिप्स अपनाउनुहोस कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुहोस
तपाईको (सोमबार साउन १२) को राशीफल
शनि पुजा गर्दा यो कुरामा ध्यान दिनुहोस !
२०७६, २८ असार शनिबार ०७:५७ July 13, 2019 clickon
२०७६, ३ आश्विन शुक्रबार ००:३४ September 20, 2019 clickon